Momba ANAY - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics
NewGenApps, Manokana amin'ny vahaolana IT vaovao ary mitarika amin'ny teknolojia maoderina rehetra.
Niorina tamin'ny Jona 2008, NewGenApps dia iray amin'ireo lohalaharana amin'ny fampiharana teknolojia vaovao. Ny zavatra natomboka tamin'ny Fampandrosoana ny Fampiharana Smartphone sy ny Cloud Solutions dia navadika ho fahendrena artifisialy, Learning Machine, Big Data Analytics ary vahaolana AR / VR ihany koa.
At NewGenApps, ezahinay ny manohy manome vahaolana IT sarotra sy farany finday avo lenta fampiharana rehefa mivoatra ny tsena. Miaraka amin'ny haitao IT isan-karazany sy ny fahaiza-mivoatra matanjaka, ny ekipa manam-pahaizana dia natokana manokana hanome ny vahaolana teknolojia tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika manerantany. Ny orinasa, izay natomboka tamin'ny mpikambana 3 tamin'ny 2008, dia nanompo mpanjifa 1000+ ary nahavita tetikasa 5000+ tamim-pahombiazana.
Avelao izahay lazao aminao fohy momba ny Diantsika
Ahoana no nanombohantsika
100+ amin'ireo orinasa mahomby manerantany miaraka am-pitokisana
Tongava anay Partner
Ampitomboy ny fifaninanana anananao ary miditra amin'ny fianakavian'i NewGenApps mpiara-miasa .
NewGenApps mpiavonavona mpiara-miasa
Nampitombo ny tamba-jotra mpiara-miasa amin'ny fantsona izahay nandritra ny taona maro. Miara-miasa amin'ny orinasa kilasy ambony izahay rehetra izao manerana izao tontolo izao.
Orinasa vokatra miaraka amin'ny toeran'ny tsena napetraka
Fanoloran-tena amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika tsy tapaka
Fandaharana an-tsambo mpiara-miasa mahomby
Fanohanana mpiara-miasa matihanina
Ndao hiresaka Partnership
Liana amin'ny ho tonga mpiara-miasa aminay, Mifandraisa aminay anio!